बचत खातामा पनि पाइन्छ मानग्य ब्याज, कुन बैंकले कति दिन्छ ? - Arthatantra.com
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएसँगै धमाधम बचतमा ब्याज बढाएका छन् । बैंकहरुले भदौ महिनामा मुद्दती निक्षेपमा दिने जती ब्याज अहिले बचतमा नै दिने थालेका छन् ।
अहिले बैंकहरुले बचत खातामा नै ६.५२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिन थालेका छन् । सबैभन्दा बढी ब्याज बचत खातामा पनि एनएमबि बैंकले ४.५२ देखि ६.५२ प्रतिशतसम्म दिने भएको छ । भदौ महिनामा करिब आधा दर्जन बैंकले मुद्दती खातामा पनि यति ब्याज नदिने गरेका थिए । तर अहिले ब्याज ह्वात्तै बढेको छ ।
यस्तै माछापुच्छे बैंकको बचतमा असोज महिनामा ३.७५ देखी ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ । यस्तै नबिल बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरमा बचतमा ४.२६ देखि ६.२६ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । भदौ महिनामा नबिल बैंकले मुद्दती खातामा नै ५.७१ देखी ७.५१ प्रतिशत ब्याज दिने गरेको थियो । अहिले त्यो भन्दा बढी ब्याज बचत खातामा नै दिने योजना ल्याएको छ । यो भनेको बैंकमा लगानीयोग्य रकमको अभावका कारण ल्याएको योजना हो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले बचत खातामा ३.०६ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ । कृषि विकास बैंकले साधारण बचतमा ३.५० प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ ।
एभरेष्ट बैंकले बैंकले बचतमा ३.६१ देखी ४ प्रतिशत, सनराइज बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजरमा बचत तर्फ ५.०७ प्रतिशत ब्याज पाइने भएको छ ।
सेञ्चुरी बैंकले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमा बचत तर्फ नै ४.२५ देखि ६.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ भने नेपाल बंगलादेश बैंकले बचतमा ३.७६ देखि ४.७६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ । हिमालयन बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदरमा बचतमा ४.२५ देखि ६.१५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले बचत खातामा ३.२५ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ ।
स्टयान्र्डड चार्टर्ड बैंकले बचतमा २ देखि ४.५ प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । माछापुच्छ्रे बैंकको बचत खातामा ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाइने छ भने प्राइम बैंकले बचत खातामा ४.७६ देखि ५.७६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने योजना ल्याएको छ ।
सानिमा बैंकले बचत खातामा ३ देखि ५ प्रतिशत, सिभिल बैंकले बचत खातामा ४.२५ देखि ६.२५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने भएको छ । यस्तै एनसीसी बैंकले बचतमा ४.२६ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने जनाएको छ ।
वि.सं.२०७८ असोज १ शुक्रवार १६:२७ मा प्रकाशित
अघिल्लाे कामना सेवा विकास बैंकले ल्यायो उच्च ब्याजदरसहित नयाँ बचत खाता, कति प्रतिशत पाइने ?
पछिल्लाे केही दिनमै आउँदैछ ७० करोडको नयाँ आईपीओ, कति र कहिलेसम्म दिने आवेदन ?